नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रमाथि धक्का : चुनावी तालमेल - Shirish News
नागरिक अधिकार र प्रजातन्त्रमाथि धक्का : चुनावी तालमेल
२०७९ बैशाख ७, बुधबार ०८:४० बजे
स्थानीय निर्वाचनमा चुनिएर आएपछि मिलिजुली काम गर्ने सवालमा भने गठबन्धन आवश्यक हुन्छ । संसदीय निर्वाचनपछि सरकार निर्माण गर्दा गठबन्धन गरिनु पनि स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रो संविधानले सरकार गठनका लागि यो प्रावधान खुल्ला राखेका कारणले मात्र नभइ सबै दलका प्रतिनिधि मिलेर मुलुकमा राम्रो गर्नका लागि पनि यसले टेवा दिन्छ तर हामीकहाँ राम्रो गर्ने भन्दा पनि भागबण्डाका लागि गठबन्धन गर्ने गरिएको छ । चुनावपछिको तालमेलले कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता र चुनावी खर्चको बोझबाट मुलुकलाई बचाउँछ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यमवाट आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने, जनभावनाअनुसार नचल्ने वा आफ्नो देशको नीति-कानून नमान्ने पार्टी तथा उम्मेदवारलाई नागरिकले नचुन्न सक्छन्।
राजनीतिक आस्थाविपरीतको पार्टी र उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने बाध्यता यसैगरी सिर्जना गर्दै जाने हो भने राजनीतिक दल र प्रजातन्त्रप्रति नै नागरिकहरूको आस्था घट्छ । प्रजातन्त्र भनेको आफूले चाहेको राजनीतिक दलमा भोट हाल्न नपाउनु हो भन्ने अर्थ लाग्छ, लागिरहेको छ । जब अभ्यास नै त्यस्तो हुन्छ भने प्रजातन्त्रप्रतिको बुझाइ फरक पर्नु स्वभाविक हुन्छ । प्रजातन्त्रमा नागरिकहरूलाई नेतृत्वको दास बनाइँदैन, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाइन्छ ।
कुनै पनि मानिस राजनीतिक दलप्रति झुकाव किन राख्छ ? या राजनीतिमा किन आउँछ ? किनभने उ कुनै दिन आफू नेतृत्वमा पुग्न चाहन्छ । त्यसका लागि आफ्नो आस्थाअनुसारको दल रोज्छ, सदस्यता लिन्छ, राजनीतिक गतिविधिमा आफूलाई सहभागी गराउँछ । जब आफूले नेतृत्व लिनुपर्ने बेला आउँछ अनि त्यतिबेला आफू उठ्न त के भोट हाल्न पनि पाउँदैन भने उसले मेरो देशमा प्रजातन्त्र छ र म प्रजातान्त्रिक दलमा आस्था राख्ने मान्छे हुँ भन्ने कुराको महसूस कसरी गर्ने ? दलिय तालमेलका कारण आफूले आलोचना गर्दै आएको या सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार नगरेको दललाई भोट हाल्नुपर्दा दल छोड्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ ।
पार्टीको आन्तरिक र बाह्य नेतृत्व विकास ठप्प हुन्छ । उदाहरणका लागि चितवनमा फेरि तालमेल गरियो भने त्यहाँका काङ्ग्रेस नेताहरूको दश वर्षको समय नेतृत्व अभ्यास गर्नै नपाइ सकिन्छ । नेतृत्व लिनु भनेको कुनै दलको सदस्य हुँदै कार्यकर्ता हुनु मात्र होइन । आम नागरिकहरूका बीच आफूलाई प्रस्तुत गरी उनीहरूको समर्थन लिएर आफूलाई परीक्षण गर्नु हो ।
गोरखाको अवस्था पनि त्यस्तै हो । संसदीय निर्वाचनमा गरिएको तालमेलले नेपाली काङ्ग्रेस गोरखामा विकास भइरहेको नेतृत्वलाई ठुलो आघात परेको छ । यस्ता गठबन्धनलाई आफ्नो दललाई बलियो बनाउन सम्बन्धित दलका समर्थक तथा कार्यकर्ताले गरेको अथक मेहेनतमाथि नेतृत्वले गरेको खेलबाडका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको दलका कार्यकर्ताले आमनागरिक माझ आफूलाई परिक्षण गर्नबाट पाँच वर्ष वञ्चित हुनुपऱ्यो ।
आगामी निर्वाचनमा पनि यस्तै तालमेल हुने हो भने गोरखा काङ्ग्रेसले नेतृत्वमा जानबाट दश वर्षलाई वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व लिने सपना बोकेर राजनीतिमा होमिएकाहरूका लागि दशवर्षे राजनीतिक उमेर निकै लामो समय हो । दश वर्षको समयमा त नेतृत्व लिन पर्खिएर बस्ने नभइ हस्तान्तरण गर्ने समय हो । कार्यकर्ताले नेतृत्वबाट अरु केही नपाए पनि आफ्नो आस्थाको चिह्नमा भोट हाल्न पाएका थिए त्यो पनि रहेन भनी ब्यवस्थाप्रति नै फरक धारणा बन्न सक्छ ।-घटना र विचार